» Astaamaha lagu garto in Xuubka Bikrada uu dilaacay + Baaritaan
Astaamaha lagu garto in Xuubka Bikrada uu dilaacay + Baaritaan
Jun 12, 2013 - jawaab	Xuubka Bikrada waxaa dusha ka dahaara bushimaha yaryar ee cambarka, waxaana Xuubkaasi uu dillaacaa habeenka gabadha la Bikra-jebinayo.
Kolka uu dilaaco Wuxuu yeeshaa Faraqyo ama Raaman, waana la dareemi karaa jiritaanka raamankaasi ilaa laga gaaro dhalmada koowaad kolkaasi oo uu si toos ah u baaba’ayo.
Dillaaca xuubka Bikrada waxa la socda dhiig bax heerar kala duwan leh Waxaa laga yaabaa in xuubku uu aad u adag yahay, uuna hor istaago Galmada, ama yahay sida laastiigga oo kale oo uusanba galmo ku dillaacin, balse goor dambe dhalmadu ay dillaaciso.
Waxa dhacda in mararka qaar afka xuubka Bikradu uu yahay mid tooxan oo uusan koobaabneyn, mararka qaarna waaba uu dahaaran yahay oo maba laha xitaa meel uu dhiigga caadadu kasoo baxo, taasi oo kallifta in dhakhtar loogu yeero.
Dhakhtarad caafimaad oo tijaabo ay la kulantay ka hadashayna waxay tiri:- Gabar lix iyo toban jir reer miyi ah ayuu ninkeedii iigu keenay rugteyda caafimaadka, Waxay ahayd gabar caato ah, midab boor ah leh, aadna u bar yar, oo ruuxii eegaa u malaynayo inay ilmo laba iyo toban jir ah tahay, Waxaan ugu horreyntii u qaatay inay raashin xumo sidaan u gashay, hase yeeshee waxa iga shaki siiyay jirkeeda oo aad mooddo in dhiiga caddaad ay qabto oo boorka leh, waxaana is iri armay dhiig sumow qabtaa, Markii aan dharka ka dhigay waxaa ii muuqatay caloosheeda buuran, Kolkii aan ninkeedii weydiiyayna waxaa uu ii sheegay inuu qabo muddo ku dhow sanad, maalmahaan dambese ay billowday in ay caloosha ka sheegato, isaga oo intaasi ii raaciyay “Waxaan u maleynayaa inay uur 5-6 bilood ah leedahay” kadib gabadhii ayaan weydiiyay su’aasha caadiga ah..?
Goormaa dhiigga caadada ah kuugu dambeysay?”, waxanay iigu jawaabtay in aanay weligeedba arag dhiig caado, kadibna ninkii ayaa lasoo booday “Gabadhu waa ay yartahay oo weli ma qaangaarin, waxaana laga yaabaa inuu uurku sabab u yahay caado la’aanta”
Gabadha kolkii aan baaray waxa ii caddaatay in uusan jirin wax uur shan bilood ahi, balse ay jiraan wax aan garan waayey Waxaan markaasi baaray ilma-galeenkii, kadibna dhabtii baa qorraxda ka caddaatay oo aad iiga nixisay.
Cambarka waxa ku dahaaran dub dhumuc weyn oo balaastiig ah, kolkii aan farta ku riixayna si sahal ah u duusmay, waxayna farteydu ku sigatay inay gaarto luqunta ilma-galeenka oo uusan u dhexeynin wax aan xuubkaasi ahayni.
Ninkii ayaan weydiiyay waxa uu ka xusuusto habeenkii aqalgalka, wuxuuna iigu jawaabay “Habeenkaas xaaskeyga waan u tegey, wax dhiig ahise kama imaan, ha yeeshee kama aanan Shakinin maadaama ay ahayd ilmo yar oo aan weli caqliyaysan”.
Markaas baan ninkii u sheegay in naagtiisu ay weli bekro tahay ayna ku dhalatay xuub bekro dhumuc weyn oo owdan, waxa caloosheeda ka buuranina uu yahay dhiiggii caadada oo bilba bisha ka dambeeysa ku ururayey, meel uu dibadda uga soo baxana la’aa. Kolkii aan xuubkii bekrada dillaaciyay waxa oodda soo goostay dhiigii duugga ahaa oo is urursaday, gabadhii markaas bay miiskii ay dul saarneyd uga toostay sidii iyada oo markii ugu horreysay ka soo nabdoonaatay cudur ku raagay) .
« Warbixinta Ka HoreysayGalmada oo la ogaaday in waxyaabo badan ay Daawo u tahay + Baaritaan	Warbixinta Xigto »Wiil Soomaaliyeed oo Habeen Walba Jacel in uu Todobo Gabdhood La sheekaysto. Sheeko Xiiso Badan	Leave a Reply Cancel reply